Koroonaavaayiras: Laaboraatoorii keessaa ba’e yaada jedhuuf ragaan jiraa? – Rabira News
April 19, 2020 Bonsa
Koroonaavaayiras: Laaboraatoorii keessaa ba’e yaada jedhuuf ragaan jiraa?
Ragaaleen Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaarraa bahan akka mullisanitti, aangawoonni embaasii keessaa waanti laaboraatorii Wuhaan Chaayinaatti argamu keessatti adeemu akka isaan yaaddesse agarsiisa.
Laaboraatoriin kunis kun magaalaa weerarri koroonaavaayiras takka jedhee itti eegale keessatti argama.
Doonaaldi Tiraampis odeeffannoowwan vaayirasiin kun laaboraatoorii keessaa miliqe jedhaman qulqulleessaa jiraachuu dubbatu.
Maalidharee, yoo akkas ta’e, waa’ee weerara vaayirasii kanaa waan beeknu irratti waa ida’aa?
Odeeffannoowwan kunneen maal jedhu?
Gaazexaan ‘The Washington Post’ jedhamu gabaasa qabatee ba’een, diippiloomaatonni saayinsii Ameerikaa bara 2018 keessa gara giddu-gala qorannoo Chaayinaa tokkotti irra deddeebiin deemaa akka turan hima.
Anga’oonnis waa’ee qabiinsa badaa laaboraatoorii ilaalchisee akeekkachiisa lama gara Waashingitanitti erguutu himama.
Anga’oonni kunneen akkaataa Inistitiyuutiin Vaayirooloojii Wuhaan (WIV) jedhamu itti hogganamu isaan yaaddessuufi gargaarsi akka godhamu gaafachuu gabaasni kun dubbisiisa.
Qoronnoo laaboraatooriin kun simbira halkanii irratti geggeessaa tures weerara ‘SARS’ fakkaatu fiduu akka malus yaadda’anii akka turan himama.
Gaazexaan kun akka jedhutti, odeeffannoowwan kanneentu yaada vaayirasiin kun laaboraatoorii WIV yookaan dhiyeenya sanatti argamu keessaa miliqee ba’e jedhu irratti gaazii naqaa jira jedha.
‘Fox News’ gamasaatiin gabaasa yaad-rimee argama laaboraatoorii kanaarratti qopheessee jira.
Weerarri kun dhuma bara darbee gabaa nyaataa Wuhaan keessa jiru irraa ka’e jedhama. Amma yoonaatti garuu vaayirasiin kun dhuguma laaboraatoorii keessaa miliquusaaf ragaan qabatamaa hin argamne.
Laaboraatooriiwwan of-eeggannoo akkamii taasisu?
Laaboraatooriiwwan vaayirasiifi baakteeriyaa qoratan mala ‘BSL standards’ jedhamutti fayyadamu. BSL ammoo Biosafety Level (Sadarkaa Of-eeggannoo) kan jedhu bakka bu’a.
Innis sadarkaawwan 4 kan qabu yoo ta’u, 1ffaa irraa 4ffaa hanga ga’utti of-eeggannoon taasifamu daran dabalaa deema. Raashiyaatti ammoo faallaa kanaatiin deema.
Vaayirasoonniifi baakteeriyaawwan yeroo gara garaatti laaboraatoorii keessaa miliqanii beeku
Inni baramaan, sadarkaa tokkoffaatti, vaayirasiifi baakteeriyaa dhala namaaf yaaddessoo hin tanetu itti qoratama. Sadarkaa 4ffaatti ammoo warreen of eeggannoo ol-aanaa barbaadantu itti qoratama.
Odeeffannoowwan kunneen dadhabina akkamii ibsaa turani?
Deebiin gabaabaan, gabaasa Waashingitan poosti baaserra wanti ifatti himame hin jiru. Walumaagalatti garuu sadarkaaleen of-eeggannoo laaboraatooriiwwan qorannoo akkasii geggeessan keessatti dogoggorri gama hedduun uumamuu mala.
Odeeffannoowwan kunneen yaaddoo akkamii ibsaa turani?
Balaawwan ni mudatu. 2014’tti, hafteewwan ‘smallpox’ dhiyeenya laaboraatoorii Waashingitanitti argamutti argamee ture.
2015’tti ammoo, dooniin waraanaa US akka tasaa ‘anthrax’ (dhukkuba beeyiladoota miidhu) kan lubbuun jiru geejjibee laaboraatooriiwwan biyyattii keessa jiran sagaliifi Kooriyaa Kibbaatti geessee ture.
Koroonaavaayiras yeroo dhufetti laabooraatooriidhaa miliqe hin jedhamnee?
Eeyyeen, jedhameera. Gabaasni hedduunis ragaa qabatamaa malee ba’aa ture. Odeessi Amajjii darbe akka malee qoodamee ture tokko, vaayirasiin kun waraan baayooloojiiti jechuun ibsaa ture.
Namni vaayirasii kana qorataa jiran Dr. Leentizoos akka jedhanitti, ‘‘gaaffii jabaataadha, golgaa duubaan yaadonni gara garaa nika’u, ogeessota nageenya baayooloojii birattis gaaffiin ka’umsa vaayirasichaa dhuguma gabaa nyaataa keessaa dhufee jedhu nika’a.
Haata’u malee, amma yoonaatti ragaan qabatamaa inistitiyuutii qorannoo Wuhaan keessa jirutu vaayirasii kanaaf sababa jedhu hin argamne
Previous Yunaayted Isteetsi itti hogganaan Quunsila Itiyoophyaa Los Angeles Dr Birhaanemesqel Abbabee Sanyii hojii irraa dhaabsifaman
Next ማነው ከኦሮሞ በላይ ኢትዮጵያዊ ??